काठमाडौं, २५ जेठ । संघीय संसदमा जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट पेश गरेपछि अहिले मन्त्रालयगतरुपमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी छ ।
यसक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ । खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनारले यसको जवाफ सोमबार बस्ने संसद बैठकमा दिने छन् ।
सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष नेपालमै १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद सागको आयोजना भएकाले पनि खेलकुद क्षेत्रमा बजेट बढी थियो । तर यस पटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण समग्र बजेट नै घटेर आएका बेला सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेट पनि घटाएको छ ।
एकै दिन सातवटा मन्त्रालयका बजेटमाथिको छलफल भएकाले अधिकांश सांसदहरुको समय अन्य मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा बोल्दैमा समय सकिएको थियो । तर, केही खेलकुदलाई बुझेका र माया गर्ने सांसदहरुले भने खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि पनि टिप्पणी गरेका छन् । खेलकुद मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयको छलफलका लागि संसदमा झण्डै साढे ६ घण्टा बैठक चल्दा सांसदहरुले खेलकुदको विषयमा २० मिनेट पनि दिएनन् । कतिपय सांसदहरुले खेलकुद ‘खे’ पनि उच्चारण गरेनन् भने केही सांसद्हरुले बजेटलाई जोडेर एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा समय खर्चिए ।
सत्तारुढ दल नेकपामा सांसद् तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खेलकुद क्षेत्रमा बजेट कम हुनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन् । साथै उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत वर्ष १३ औं साग आयोजनाका कारण बढी बजेट पाएको स्मरण गराउँदै यस पटक नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मात्रै आयोजना गर्नुपर्ने रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
साथ साथै मन्त्रीले जवाफ दिने शैलीमा जीवनरामले सामान्य अवस्थामा भएको भए बजेट बृद्धि हुनुपर्ने थियो भनेका थिए । यसैगरी राखेप अन्तर्गत निर्माणाधिन पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिने, खेलाडीहरुलाई आजीवन भत्ता दिने कुरा पनि राम्रो भएको भन्दै बजेटको बचाउ गरे । साथ साथै १३ औं सागमा नेपालले हात पारेको सफलताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा भने मन्त्रालय चुकेको उनको भनाई थियो । नयाँ खेलकुद ऐन आउने तयारीमा रहेकाले त्यस अनुसारको बजेट नआएर कनिका छर्ने खालको आएको श्रेष्ठको टिप्पणी रह्यो ।
यसैगरी कोरोना महामारीबाट खेलकुद क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक योजनाहरु बजेटमा नभएको पनि उल्लेख गरे ।
खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय खेलको रुपमा रहेको भलिबल खेलको विकासका लागि बजेट मौन बसेको पनि आरोप लगाए । भलिबलको विकासका लागि बजेट आउनु पर्ने थियो त्यो आउन सकेन ।
योजनाबद्ध रुपले युवाहरुलाई सजग बनाएर अघि लैजाने किसिमको कार्यक्रम पनि आएको छैन ।
भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वरी भँगेरी डाँडाको बहाल बन मासेर खेलकुद मैदान बनाउन सरकारले नै बजेट दिएको हुनाले त्यहाँ ठूलो विरोध भएको छ । त्यो क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी पानीको संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । खेलकुदको नारा स्वास्थ्य, मित्रता, अनुशासनता र सार्वभौमिकताको रक्षा राख्नु पर्छ ।
रंगमती शाहीले युवा तथा खेलकुदमा बजेट कम भएको र त्यसमा पनि उपलब्धिमूलक कार्यक्रम भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरु पाल्ने खालको भएकाले आफूले मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गरेको बताएकी थिइन् । खेलाडीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन, एक खेल एक मैदान निर्माण हुनुपर्ने त्यो पनि छैन । खेलाडीहरुको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेमा त्यता तर्फ पनि ध्यान पुगेको छैन । सरकारी, निजि ठूला उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा समूह वा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडीहरुलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले त्यस्ता संस्थाहरुलाई करमा छुट दिएर खेलाडीहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । यसैगरी देशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एक खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि ध्यान पुगेको छैन ।
सरकारले नारायणी रंगशाला विरगञ्जका लागि ५० लाख छुट्याएकोमा सांसद प्रदीप यादवले विरोध जनाए । उनले भने सुन्दा ५० लाख ठूलो रकम भए पनि दशरथ रंगशाला जस्तो ठूलो रंगशाला भएकाले त्यो अपुग हुने उनको भनाई छ । साथै उनले नेपाल सरकार, पञ्चको श्री ५ को सरकारले नबनाएको भन्दै स्थानीयले लेभि उठाएर बनाएको रंगशालालाई अन्याय भएको उल्लेख गरे । उनले केन्द्र सरकारले बनाउन नसके प्रदेश सरकारले नारायणी रंगशाला बनाउने आश्वासन आफूले पाएको पनि संसदमा बताएका छन् ।
अहिले रंगशाला कोमामा गएकाले ५० लाख रुपैयाँमा एउटा पार्टको पनि काम नहुने उल्लेख गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउनका लागि स्पेशल बजेटको व्यवस्था गर्नुस् होइन भने प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउँछ । यसैगरी खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बढी बजेट थुपारेको आरोप पनि लगाए । उनले मन्त्रीले अहिले क्षेत्र नभनेर स्थानीय तहहरुका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए ।
मन्त्रीलाई एन्फाले पनि माया गरेको छ । उहाँलाई पोखरामा एकेडेमी बनाउनका लागि १७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । मन्त्रीको बलमा एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले मधेसको राष्ट्रियताका विषयमा टिप्पणी गरेको यादवको दावी थियो ।
युवा तथा खेलकुदले माथागढी, रम्बा र पुरुखोला गाउँपालिका तथा रामपुर नगरपालिकामा खेल ग्राम सञ्चालनको माग गरेका छन् ।
युवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था जति सक्यो धेरै गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यो चुनौतीलाई समाना गर्नका लागि बजेटका शीर्षकहरु आएको छ । हरेक स्थानीय तहमा खेल मैदान बनाउने कुरा अत्यन्तै स्वागत योग्यछ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री कास्की जिल्लाको मात्रै हुनुहुन्छ की सातै प्रदेशको हुनुहुन्छ । सांसद् गौरीशंकर चौधरीको प्रश्न थियो । कैलालीको कुन कुन ठाउँमा बजेट छुट्याउनु भएको छ प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
खेलकुदमन्त्रीले पूर्वाग्रही ढंगले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट दिएको आरोप सांसद झपट रावलले लगाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा टुक्रा टुक्रा गरेर बजेट दिनु दुर्भाग्य हो ।
खेलकुद मन्त्रीले विभेद गरेको आरोप तेजुलाल चौधरीले लगाए । प्रदेश २ का स्वर्ण पदक खेलाडीहरु अहिले पनि हलो जोति रहेको र उनीहरुलाई रोजी रोटीको समस्या रहेको बताए ।
सागमा स्वर्ण पदक जितेको व्यक्तिले खान लाउन पाएको छैन । मन्त्रीको कार्यकर्ता भएको भए प्रशिक्षक वा अन्य ठाउँमा भर्ति भइसकेको हुन्थ्यो । तर, २ नम्बर प्रदेशमा खेलाडीहरुलाई किन हेला गर्नुभएको छ ?
बाँके जिल्ला क्रिकेटको उद्गम स्थल पनि हो । गत बर्ष २ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसले काम शुरु भएको छ । यस वर्ष थप बजेट आउने आशामा हामी थियौं तर बजेट घटेर १५ लाखमा झरेको छ । त्यो केको लागि हो मन्त्री ज्यु ?
सागको सफलता अनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेन ।
खेलकुद ग्राम बनाउने कुरो स्वागत योग्य छ । बजेट स्पष्ट छैन, स्पष्ट गर्न माग गर्छु ।
खेलकुद मन्त्रालयले सिमा भित्र रहेर बजेट प्रश्तुत गरेको छ । ४० प्रतिशत युवा भएको मुलुकमा १ अर्ब बजेट छुट्ीनु दुःखद् हो । खेल ग्राम बनाउने देखि खेलाडीलाई सुविधा दिने सम्मका कुराहरु पुरा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले खेलकुद मन्त्रालयको बजेट थप गर्नुपर्छ ।
खेलग्राम बनाउनु राम्रो कुरा । नारायण नगरपालिकामा निर्मार्णाधिन खेल मैदान बजेट अभावका कारण रोकिएको छ । त्यसकालागि थप बजेट विनियोजन होस् ।